Gbasara anyị - Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd.
MINI onye na-egwupụta ihe
Igwe efere igwekota
Igwe oru ohia
Ngwaọrụ ndị ọzọ
YANTAI DONGHENG igwe CO., LTD
Professional mgbakwunye mgbakwunye na-ere ákwà na-ewu, ugbo na oke ohia igwe, nke-agba mbọ ka anụ mma maka ndị ahịa.
Anyị zuru ụwa ọnụ
Na anyị 12 afọ n'ichepụta na ire ahụmahụ, anyị kere anyị onwe anyị ika Eze. Dị ka onye na-eduzi ndị na-emepụta ihe eji egwupụta ihe, anyị raara onwe anyị nye ịbụ ndị na-ebute ụzọ na teknụzụ na ihe ọhụrụ. N'ụzọ ndị a, ebupụla ngwaahịa HEER n'ọtụtụ mba, dịka Germany, Denmark, Russia, USA, UK, Canada, Netherlands , New Zealand, Indonesia, nke ndi ahia n’uwa nile choro.
Emeputa na ire nke igwe ihe owuwu na ihe ndi ozo
1. Gbasara anyị
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. e guzobere na 2010 wee bụrụ onye ndu ọnọdụ na excavator Mgbakwụnye igwe na a ngwa ngwa ijeụkwụ.
Companylọ ọrụ anyị agafeela ISO9001: nyocha 2015 na CE. Anyị bụ ndị mba elu-tech enterprise na ọrụ, ịpụ iche na ọhụrụ. Companylọ ọrụ anyị nwere ikike ọgụgụ isi nke onwe ha. Ruo ugbu a, anyị enwetara ihe karịrị ikike iri atọ. Nke ahụ mere ka Dongheng bụrụ onye ndu na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ihe owuwu ndị China.
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. na-agba mbọ iji R&D, rụpụta na-ere excavator mgbakwunye maka ewu, ugbo na oke ohia igwe.
KINGER isi azụmahịa nwere Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw head, Mixer ịwụ, igwekota efere, Hedge trimmer, Chain trencher, Osisi shiee, Stump planer, Hydraulic hama, Ndenye coupler, Ibulite ahịhịa na ndị ọzọ na-ewu ígwè ọrụ na mgbakwunye.
3. Production Usoro
N'ime usoro ịgbaso mmepụta, anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ ahịa ga-agbasi mbọ ike ma mee ka ịdị mma, nnyefe, ọnụahịa ma ọ bụ mkpa dị ka ihe ị chọrọ iji mezuo atụmanya gị ruo otu o kwere mee. , anyị na-ekwe nkwa ogo ngwaahịa anyị, na-agbaso ụkpụrụ omume azụmaahịa ma debe ihe nzuzo azụmahịa.
4.ma Okwa mmesi obi ike
Ngwaahịa anyị jiri nkà na ụzụ ọhụrụ dị elu, tinye ya na ihe kachasị mma ma kwado ya site na nyocha dị iche iche na ule nyocha iji jide n'aka na àgwà ahụ dị mma na arụmọrụ ka mma.
Na mgbakwunye, anyị kwupụtara ọla edo soplaya na Alibaba.We nwere ike ịnapụta ngwongwo 100% na oge na-ekwe nkwa.
Anyị na-enye 24-hour oru nkwado zuru ezu na ọrụ ntanetị.Ọ bụ n'ihi na anyị nwere ndị R&D nke anyị, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na ngalaba ọrụ aka, anyị nwere ike inye gị aka aka.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla mgbe ịzụrụ ngwaahịa ọ bụla anyị, biko egbula ịhapụ anyị ozi. Anyị ga-akpọtụrụ gị ozugbo enwere ike ịlele.
Nweta Akụkọ kacha ọhụrụ Site n’aka anyị
Shanxi Road East, Qixia Economic Development Mpaghara, Yantai, Shandong, China